पटक-पटक फेरिरहने नेताहरुको बोली र अन्यौलको राजनीति !! « News from Nepal as it happens | Nayakhabar.com
पटक-पटक फेरिरहने नेताहरुको बोली र अन्यौलको राजनीति !!
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने बिषयमा छलफलका लागि बसेको चार दलको बैठक सकिएको छ । बैठक ले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी को नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने बाधा अड्काउ फुकाउ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठक ले चार दलका ८ सदस्य रहेको कार्यदललाई बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न २ दिनको समय दिएको छ । बुधबार बस्ने चार दलको बैठक मा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न कार्यदललाई जिम्मा दिइएको बैठक मा सहभागी कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेललले जानकारी दिए ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावको आधारमा सरकार निर्माण प्रक्रिया र अन्य प्रक्रियामा कदम चालिने पौडेलले जानकारी दिए । चार दलको बैठक सेना समायोजन बिशेष समितिको सचिवालय बानेश्वरमा बसेको थियो ।
आज बिहान चार दलका शिर्ष नेतासागको भेटमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने आशय व्यक्त गरेपछि चार दलले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
चार दलको बैठक ले सर्वोच्च अदालतले आज जारी गरेको बिज्ञप्तीको पनि स्वागत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा राष्ट्रिय राजनीतिको जटिलता अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीश रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न सकारात्मक रहेको इंकित गरिएको छ ।
3 Responses to “पटक-पटक फेरिरहने नेताहरुको बोली र अन्यौलको राजनीति !!”
Yuvraj Chhetri USA says:	February 26, 2013 at 12:09 am	यो बाधा अड्काउ के ले बाधेको छ, फुकाएर त्येसैले राम्रो संग यी ४ दलका नाइकेहरुको मुखमा फेरी एसका बारेमा बोल्न नमिल्ने गरि बाध्नु पर्छ .
नत्र फेरी एनी नाइकेहरुले बोलि फेर्ने छन् . कि कसो हो ???????
Reply	gangabgrg says:	February 26, 2013 at 7:18 am	नेपाल को नेता हरु देश र जनता को लागि सहमति सम्झौता गर्दैन, आफ्नो दुनो सोझो भएन भने मात्र बध्त्ताले मात्र सहमति सम्झौता गर्छन.
Reply	BALARAM says:	February 26, 2013 at 3:56 pm	चुनाब भएपनि कसैको बहुमतको सर्खर हुदैन तेस्लेगर्दा संबिधान पनि खैके खैके भनेजस्तै
हो संबिधान को आशा गरौ तर धरै मान्छे मर्छ आउनु गरोछा संबिधान!!!!!!!बस हेरी